Dib u dhaca doorashada oo saameyn dhaqaale sababtay | KEYDMEDIA ONLINE
Dib u dhaca doorashada oo saameyn dhaqaale sababtay
Dib u dhaca doorashada Soomaaliya ayaa xilligan yeelatay saameyn aad u weyn, waxana ilaa iyo iminka aan si rasmi ah loo ogayn waqti ay soo idlaaneyso doorashada.
MUQDISHO, Soomaaliya - Sida ay sheegayaan ganacsatada ku nool Magaalada Muqdisho iyo gobolada kale ee dalka, dib u dhaca doorashada ayaa curyaamiyey nidaamkii dhaqaale ee waddanka.
Ganacsata noocyada maciishada iyo agabka muhiimka ah keena Soomaaliya ayaa sheegaya in ay yaraadeen shixnadaha ganacsi ee ay soo dhoofsanayaan, taasoo sababtay in qiimo badan ay ku iibiyaan kuwii hore u soo gaaray.
Sidoo kale waxaa meel hoose maraya maalgashigii ay sameyn jireen shirkadana ganacsi, kuwaasoo dadka leh ganacsiyada yar yar la yeelanayey xiriir ganacsi oo ku dhiira galiya in ay soo saartaan nolol maalmeedkooda.
Shirkada Micro E-Dahab oo taageerta dadka leh ganacsiyada yar yar iyo kuwa ku haminaya in ay furtaan ayaa KEYDMEDIA ONLINE, u sheegtay in aysan sameyn wax maalagalin ganacsi ah tan iyo markii la guda galay marxaladan kala guurka ah.
Dhanka kale, Shirkadaha duulimaadyada ayaa tilmaamaya in howlahooda safarada ay aad u hooseeyaan,waana in ka yar tiradii ay filanayeen maadaama xiliga kala guurka ay kordhi jireen codsiyada duulimaadyada isla markaana loo kala socdaali jiray deegaannada kala duwan ee ay doorashadu ka dhaceyso.
Dib u dhaca doorashada ayaa sidoo kale saameeyey arimaha la xiriirka dhismaha guryaha, kaasoo hakad xoogani uu galay, mana jiraan milkiilayaal qorsheynaya xiligan in ku deg degaan in loo sameeyo dhismo guri.
Waxaa iyana hoos u dhacay kala iibsiga boosaska, sababo ku wajahan cabsi laga qabo in xaaladu is badasho, waxana walaaca ugu ba'an muujinaya dadka dalaalka ah,kuwaasoo noloshooda maalinlaha ka soo saaran jiray shaqadaasi.
Arimahan ayaa ku soo aaddaya xilli hoggaanka Villa Somalia uu ku howlan yahay in aysan dalka ka dhicin wax doorasho ah, iyadoo iska daba jiitankan ay uga dhigan yahay mid u kordhinaya mudada ay sida sharci darrada ah ugu nagaanayaan Aqalka Sooomaaliya looga arimiyo.
Dadka qaar ayaa qaba in arrimaha doorashada ay sii ragaadinayaa khilaafka u labada masuul ee dalka ugu sareysa,kuwaasoo sida iminka la aaminsan yahay aan wax xiriir ah lahayn.
Soomaaliya oo ah dal dhaqaale ahaan aad u liita,isla markaana iminka soo kabanaya ayey qubarada dhaqaalaha bartay sheegayaan in dib u dhaca doorashada ay horseedi doonto bur bur dhaqaale oo hor leh,kaasoo iminka saan-saankiisu muuqdo.
Si kastsba, weli waxey xubno ka harsan yihiin doorashadii aqalka sare taasoo lagu waday in ay ku soo baxaan 54 senator, mana jirto xilli si rasmi ah loo hubo in ay bilawdaan doorashada aqalka hoose, iyadoo uu dhowr mar dhaqan gali waayey jadwalkii loo asteeyey howlaha doorashooyinka.